Education Studio Broadcast & Security Command Center - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
INONA NO ATAON'NY YONWAYTECH NARROW PIXEL PITCH LED DISPLAY HO AMIN'NY FITONDRANA ANAO SY NY Efitrano fihaonambenao?
Ny teknolojia fampisehoana dizitaly HD hanatsarana ny fahombiazan'ny asa sy hanatsarana ny fiantraikan'ny sehatra dia mamela fironana vaovao amin'ny efitrano fanaraha-maso ny fampielezam-peo.
Miaraka amin'ny halalin'ny teknolojia nomerika, tambajotra ary fampahalalam-baovao amin'ny indostrian'ny onjam-peo sy fahitalavitra, ny famantarana analoga dia miova ho famantarana nomerika.
Ny fampiharana ny fampisehoana nomerika avo lenta sy ny fanaraha-maso marani-tsaina dia mihamitombo hatrany hatrany, izay mitondra revolisiona ho an'ny studio virtoaly nentim-paharazana.
Azo ianteherana amin'ny fampiasana iraka lehibe.
Avy amin'ny famolavolana indostrialy vita amin'ny metaly matanjaka ka hatramin'ny teknolojia famatsian-jiro tafahoatra vita amin'ny patanty, ny rindrina horonan-tsary LED Yonwaytech dia natao ho an'ny tontolo 7x24 ora mitsikera.
Mifanaraka amin'ny mari-pana amin'ny loko manomboka amin'ny 3200k ka hatramin'ny 9300k ary mihoatra ny 3840 ny tahan'ny famelombelomana avo lenta, hatramin'ny 65536 haavon'ny fampiharana fanitsiana famirapiratana, ary ny fanaraha-maso ny fifandanjana volondavenona dia ny sasany amin'ireo endri-javatra misy amin'ny fampisehoana LED Yonwaytech, izay mahatonga azy ireo ho mifanaraka amin'ny fampiasana an-habakabaka. .
Ny fampidirana HD-SDI misy amin'ny modely sasany dia mahatonga ny fifandraisana amin'ny fotodrafitrasa lova ho tsotra.Ny rindrina video LED tsy misy seam dia manome lamba ho an'ny vaovao, fanatanjahan-tena na hetsika natao.
YONWAYTECH LED dia manolotra karazana famaritana avo lentaFampisehoana LED Pixel Pitch tsaravokatra miaraka amin'ny endri-javatra maivana, manify ny hateviny, fampisehoana fampisehoana tsara, teknolojia splicing mirindra sy ny maro hafa.
Ny vahaolana YONWAYTECH LED Video Wall dia safidy tsara kokoa ho anao.
Misy amin'ny habe sy pixel samihafa, ny vokatray dia afaka mameno ny vahaolana ho an'ny tetikasa LED anao.
ANTONY FINE PITCH LED SCREEN TOROHEVITRA HAFA
Yonwaytech16:9 Ny tahan'ny volamenaKabinetra LED 600mm x 337.5mmmisy amin'ny pikantsary p0.9375mm, p1.25mm, p1.5625mm, p1.875mm, p2.5mm good ho an'ny 2K / HD / 4K…… Fampisehoana marika Dot To Dot